Iindaba - Yintoni ekufuneka uyiqwalasele xa ufaka isilinda entloko yegasket
Irabha eyenziweyo inokutshintsha ukumila kwayo njengamanzi. Ewe ayinako ukuhamba. Xa amandla okucinezela acinezela ukuba i-deformation inyamalale, inokubuyela kwimeko yayo yoqobo (oko kukuthi, ivolumu yegasket ayitshintshi ngexesha lenkqubo yoxinzelelo. Utshintsho, olubonakaliswe bubukhulu benguquko).
kufuneka ubenamandla awaneleyo okumelana namandla okucinezela ayenza ingene kwimeko etywiniweyo kwaye imelane noxinzelelo oluphezulu lolwelo (Oko kukuthi, iipropathi ezibonakalayo zerabha yegasket njengokuqina koqine kunye namandla okuqina).
Ngokuhlengahlengisa ifomula, ayinakufezekisa kuphela amandla aneleyo okusetyenziswa, kodwa ikwanayo neplastikhi eyoneleyo, ukuze inamathele ngokusondeleyo kumphezulu wentsimbi phantsi koxinzelelo olufanelekileyo, ngaloo ndlela ivelisa umsebenzi wokutywina (imilo yegasket kunye nembasa yokutywina Ubume be ii-grooves ziyahambelana).
Ubume benethiwekhi yamacala amathathu epolymer yerabha eyenziweyo inokumelana nokungena kolwelo olunezinto ezahlukeneyo zeekhemikhali (ukumelana nemithombo yeendaba).
5. ukumelana nobushushu
Irabha kwizinto zepolymer zinengxaki, oko kukuthi, iya kubangela ukuba zonke izinto zerabha zokwenziwa zilungele kuphela uluhlu lobushushu oluncinci ngokubhekisele kukumelana nobushushu. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe ngononophelo ifomula ebonakalayo ngokweqondo lobushushu elifunekayo lokusetyenziswa. .
6. Ubomi benkonzo
Izinto ezininzi ezintsha zokwenziwa zineempawu zobomi benkonzo ende xa kuthelekiswa nezinto zohlobo lwakudala. Oku kungenxa yokusetyenziswa kwezongezelelo ezitsha ukongeza ubomi benkonzo. Kule meko, ukhetho oluchanekileyo lolwakhiwo lwezixhobo lubaluleke kakhulu. Zonke izinto zokwenziwa ezisekwe kwirabha ziya kufumana ukuphumla koxinzelelo. Ngexesha lokusetyenziswa, ngenxa yotshintsho lwekhemikhali ngaphakathi kwezinto zokwenziwa, umsebenzi wokuqala wokutywina uya kuncipha, kwaye xa ukusebenza ngokutywina kuphantsi Kubuncinci, ukuvuza akunakuphepheka.
I-Yantai Ishikawa yokuTywina iTekhnoloji Co., Ltd. igxile kwimveliso kunye nokusebenza kweepleyiti ezahlukeneyo zokutywina, iisilinda gaskets, iigaskethi kunye namakhaka obushushu. Licandelo likasekela sihlalo we-China Friction kunye noMbutho weZinto zokuTywina kunye neyunithi kasihlalo we-Multi-cyilinda ye-Injini yeeDizili encinci ye-Injini yoMlilo yangaphakathi. Ngenye yeenkampani ezinkulu zasekhaya ezijolise kwimveliso yokutywina.